Ndụmọdụ 3 iji zere ibibi batrị nke ama gị | Akụkọ akụrụngwa
Atụmatụ 3 iji zere ibibi batrị ekwentị gị
La ngwaọrụ mkpanaaka batrị abụrụlarị otu mkparịta ụka kachasị mkpa nke mkparịta ụka na mkparịta ụka n'ime ahịa ekwentị mkpanaaka, n'etiti ndị nrụpụta na ndị ọrụ. Ọtụtụ oge anyị kwurula banyere ndụmọdụ dị iche iche iji mee ka ndụ batrị nke ekwentị gị na ụfọdụ ihe ndị ọzọ metụtara ma eleghị anya akụkụ kachasị mkpa nke njedebe anyị. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụkwa otu n’ime isi ihe ndị ọrụ ọ bụla na-ele anya mgbe ị na-ahọrọ otu ngwaọrụ ma ọ bụ ọzọ.
Otú ọ dị taa anyị ga-enye gị Atụmatụ 3 iji zere ibibi batrị ekwentị gị. Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na o yiri ka o siri ike imebi batrị nke ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ anyị, ọ nwere ike ịbụ ihe dị mfe karịa ọtụtụ n'ime anyị kwenyere. Maka nke a, ọ dị mkpa ka ị gaa n'ihu na-agụ ma ọ bụrụ na ị mepụta ụfọdụ n'ime ihe ndị ị ga-agụ n'okpuru, kwụsị ime ha ugbu a ka iwe ghara iwe gị n'oge dị mkpirikpi.
1 Chere ka batrị gwụ iji kwụọ ụgwọ ekwentị anyị
2 Isiokwu anyị ama elu okpomọkụ
3 Zere ibu na-enweghị isi na ama gị
4 Mkpebi kpamkpam
Chere ka batrị gwụ iji kwụọ ụgwọ ekwentị anyị
Mkpa ọ dị ichere ka batrị na-agbapụta ka ọ dịkarịa ala iji kwụọ ụgwọ ya, karịsịa mgbe anyị zụrụ ngwaọrụ mkpanaka, bụ otu n'ime akụkọ ifo dị ukwuu nke ọtụtụ mmadụ na-agwa, na nke ahụ bụ ụgha kpamkpam.
Ma ọ bụ ya batrị nke ngwaọrụ mkpanaka adịghị mkpa na ọkwa ha kacha nta iji gbaa ụgwọ n'ụzọ ziri ezi. Thenweta opekempe bụ naanị nsogbu na nke ahụ bụ na batrị nke ngwaọrụ mkpanaka na-echekwa ume ọ bụla ọbụlagodi mgbe ha kara akara 0% ike. Nke a na-enyere ngwaọrụ ahụ aka "ịdị ndụ." Ọ bụrụ na anyị ahapụ batrị ka ọ gbapụchaa iji kwado ya, ọ ga-ekwe omume na anyị ga - ejedebe na ike ahụ, yabụ na ikekwe ọnụ ahịa ahụ agakwaghị agbanye ma ọ bụrụ na anyị ewere ya na ọrụ ọrụ ụjọ ahụ.
Iji kwụọ ụgwọ ekwentị gị, ọ dịghị mkpa ka ọ gbanyụọ, ma na ụgwọ mbụ, ma ọ bụ na nke ikpeazụ. Oge ọ bụla ị na-agba ọsọ obere na batrị, na-eburu ngwaọrụ gị ma chefuo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile agwara gị. Batrị ngwaọrụ mkpanaka na-arụ ọrụ na okirikiri, ha niile nwekwara usoro zuru ezu iji mee ka ị kwụọ ụgwọ dị mkpa.
Isiokwu anyị ama elu okpomọkụ
Ma maka ekwentị, ma ọ bụ maka ngwaọrụ ọ bụla ọ dị mma ido ya n'okpuru okpomọkụ, karịsịa nọgidere. Igwe ndị a dị elu nwere ike ịkwụsị imetụta batrị ahụ, belata arụmọrụ ya ma ọ bụ mebie ya nke ukwuu, nke nwere ike ịnye arụmọrụ dị ala, n'agbanyeghị na ọ dị ọhụrụ.
Enwere ike ịmepụta okpomọkụ dị elu nke batrị na n'ozuzu nke ngwaọrụ n'ihi, dịka ọmụmaatụ, iji egwuregwu dị elu na njedebe ndị na-enweghị atụmatụ egosipụtara. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume na smartphone na-enweta nnukwu okpomọkụ site na ịhapụ ya dịka ọmụmaatụ na anyanwụ ma ọ bụ n'akụkụ ngwaọrụ ndị ọzọ na-enye nnukwu okpomọkụ.
Dị ka o kwere mee, gbalịa ka ị ghara idobe ekwentị gị na ogo dị elu ma ọ bụrụ na ị hụ na ọnụ ọkụ gị na-ekpo ọkụ karịa ka ọ na-adịkarị, wụnye otu n'ime ọtụtụ ngwa ndị dịnụ nke na-enye gị ohere ịmara ọnọdụ dị n'ime ya. Otu n'ime ha ga-ekwe omume CPU-Z maka gam akporo ma ọ bụ PC Nyochaa maka iOS, nke anyị na-enye gị njikọ njikọ dị n'okpuru. A naghị atụ aro okpomọkụ dị elu nke ọnụ gị na ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere na batrị gị nwere ike ọ bụghị naanị ibibi ma ọ baghị uru, yabụ kpachara anya.
Zere ibu na-enweghị isi na ama gị
Anyị ekwuola na mbụ na Batrị bụ otu n'ime ihe kachasị emetụ n'ahụ nke ngwaọrụ mkpanaka ma ya mere a ga-elekọta ya anya dị ka o kwere mee, na-agbalị karịa ka ị ghara ibibi ya n'oge ndụ ya.
Otu n’ime ụzọ iji bibie ya bụ site n’izere ibu ndị na-adịghị mkpa. Ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ idebe batrị nke ngwaọrụ mkpanaka, na ụgwọ karịrị 15%. Nke a pụtara na ndụ ya bara uru adịghị n'ihe egwu na anyị nwere ike iji ya n'ọkwa kachasị elu ogologo oge. O doro anya na ọ bụrụ na anyị chọrọ ya, anyị ga-akwụrịrị ụgwọ ekwentị anyị, mana a ga-ezere ebubo ndị na-enweghị isi dị ka o kwere mee.
Otu ụgwọ na-enweghị isi bụ nke, dịka ọmụmaatụ, anyị na-eme n'etiti etiti ehihie mgbe anyị ka nwere batrị 60%. Ibu a dịkwa n'ọtụtụ oge adịghị erute 80%, nke anyị na-enweta ntakịrị obodo kwụụrụ onwe ya ma mebie batrị ahụ nke ukwuu. Ihe kachasị mma ga-abụ ịpị batrị fọdụrụnụ, ọbụlagodi na-eme ka usoro nchekwa batrị ma mezuo ụgwọ na njedebe nke ụbọchị, na-ezere ụgwọ nke doro anya na ọ dịghị mkpa.
Mgbe anyị na-ekwu maka ibu adịghị mkpa, anyị na-ekwu maka ịghara ịmanye usoro nrụgide na-adịghị mkpa. Dika anyi nile mara ihe anakpo batrị nwere oke, n’agbanyeghi n’onweghi onye ma obu ihe n’enweghi onye obula na eru ogwugwu ya, onweghi ihe n’eme ka ibibi ufodu ihe ndia n’achoghi anyi.
Anyị na-ebibi batrị nke ngwaọrụ mkpanaka anyị, n'ọtụtụ oge na-amaghị ya, ma na-atụkwasịkarị n'echiche ụgha ndị na-aghọ eziokwu nke ewu ewu na oge.
Mgbe ị nyechara gị ndụmọdụ ndị a iji lekọta, ma ọ bụ kama ibibi batrị nke ngwaọrụ mkpanaka anyị, echere m na ọ dị mkpa ịgwa gị na ụzọ kachasị mma iji lekọta batrị nke ọdụ ọhụrụ anyị ma ọ bụ nke ochie bụ site na iji ọgụgụ isi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịghara ikwe ka ekwentị anyị kpughere na oke okpomọkụ, ma ọ bụ kwụọ ya ụgwọ, na mgbaghara nke naanị ma ọ bụrụ na batrị ya dị na 80%.
Enwere m olileanya na enyerela m gị aka na usoro usoro a maka ịlekọta batrị nke ekwentị gị, mana echefula itinye ha n'ọrụ n'ihi na ọ bụghị na enyemaka ahụ ga-adị obere.
Kedu ndụmọdụ ị ga-agbakwunye na ndepụta ahụ anyị gosirila gị taa ka ọ ghara ibibi batrị nke ama gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Atụmatụ 3 iji zere ibibi batrị ekwentị gị
Xiaomi Mi Band 2 bụ ugbu a
5 kacha mma gam akporo ngwa ibudata music